GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Bislama Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Ga Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikongo Kimbundu Kongo Korean Lingala Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Maltese Mixe Mizo Moore Myanmar Ndebele Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Zulu
Isiokwu a jụrụ ajụjụ ndị o nwere ike ịbụ na ị jụọla, ọ ga-egosikwa gị ebe ndị i nwere ike ịgụ na Baịbụl gị iji nweta azịza ha. Obi ga-adị Ndịàmà Jehova ụtọ ịkọwara gị azịza ha.
1. Ònye bụ Jizọs Kraịst?
Jizọs dị iche n’ụmụ mmadụ ndị ọzọ n’ihi na ọ bụ mmụọ dịrị ndụ n’eluigwe tupu a mụọ ya n’ụwa. (Jọn 8:23) Ọ bụ onye mbụ Chineke kere, o nyekwara aka n’ike ihe niile ọzọ. Ọ bụ naanị ya bụ onye Jehova ji aka ya kee, ọ bụkwa ya mere e ji akpọ ya Ọkpara Chineke “mụrụ naanị ya.” Jizọs bụkwa Ọnụ Na-ekwuru Chineke, n’ihi ya, a na-akpọkwa ya “Okwu ahụ.”—Jọn 1:1-3, 14; gụọ Ilu 8:22, 23, 30; Ndị Kọlọsi 1:15, 16.
Chineke zitere Ọkpara ya site n’isi n’eluigwe bufee ndụ ya n’akpa nwa nke nwa agbọghọ Juu na-amaghị nwoke bụ́ Meri. Ya mere, ọ bụghị mmadụ bụ nna Jizọs. (Luk 1:30-35) Jizọs bịara n’ụwa (1) iji kụzie eziokwu banyere Chineke, (2) iji setịpụ ihe nlereanya n’ime uche Chineke, na (3) iji nye ndụ ya zuru okè ka ọ bụrụ “ihe mgbapụta.”—Gụọ Matiu 20:28; Jọn 18:37.
3. Gịnị mere ihe mgbapụta ji dị anyị mkpa?
Ihe mgbapụta bụ ụgwọ a kwụrụ iji mee ka a tọhapụ onye e ji eji. Ọnwụ na nká esoghị n’ihe Chineke zubeere ụmụ mmadụ ná mmalite. Olee otú anyị si mara nke a? Chineke gwara mmadụ mbụ, bụ́ Adam, na ọ bụrụ na o mee ihe Baịbụl kpọrọ mmehie, na ọ ga-anwụ. A sị na Adam emehieghị, ọ garaghị anwụ. Ọ bụ ezie na Adam dịrị ndụ ruo ọtụtụ narị afọ mgbe o mechara mmehie, ọ malitere ịnwụ n’ụbọchị ahụ o nupụụrụ Chineke isi. (Jenesis 2:16, 17; 5:5) Adam bufeere ụmụ ya niile mmehie na ụgwọ ọrụ ya, bụ́ ọnwụ. Ya mere, ọnwụ si n’aka Adam “bata” n’ụwa nke ụmụ mmadụ. Ọ bụ ya mere ihe mgbapụta ahụ ji dị anyị mkpa.—Gụọ Ndị Rom 5:12; 6:23.
Ònye ga-akwụli ụgwọ ihe mgbapụta ahụ iji napụta anyị n’aka ọnwụ? Mgbe onye ọ bụla n’ime anyị nwụrụ, ọ na-akwụ naanị ụgwọ mmehie nke ya. O nweghị mmadụ ọ bụla na-ezughị okè nwere ike ịkwụ ụgwọ mmehie nke ndị ọzọ.—Gụọ Abụ Ọma 49:7-9.
Ebe Jizọs na-eketaghị ezughị okè n’aka nna bụ́ mmadụ, ọ nwụrụ maka mmehie nke ndị ọzọ, ọ bụghị mmehie nke ya. Chineke zitere Ọkpara ya ka ọ nwụọ n’ihi anyị iji gosi ịhụnanya pụrụ iche O nwere n’ebe ụmụ mmadụ nọ. Jizọs gosikwara na ọ hụrụ anyị n’anya site n’irubere Nna ya isi na inye ndụ ya maka mmehie anyị.—Gụọ Jọn 3:16; Ndị Rom 5:18, 19.
5. Olee ihe Jizọs na-eme ugbu a?
Mgbe Jizọs gwọrọ ndị ọrịa, kpọlite ndị nwụrụ anwụ n’ọnwụ ma napụta ndị mmadụ ná nsogbu, o gosiri ihe ọ ga-emecha meere ụmụ mmadụ niile na-erubere Chineke isi. (Luk 18:35-42; Jọn 5:28, 29) Mgbe Jizọs nwụchara, Chineke mere ka ọ dịghachi ndụ dị ka mmụọ. (1 Pita 3:18) Jizọs cheziiri n’aka nri Chineke ruo mgbe Jehova nyere ya ikike ịghọ Eze ga-achị ụwa niile. (Ndị Hibru 10:12, 13) Jizọs bụ Eze na-achị achị n’eluigwe ugbu a, ndị na-eso ụzọ ya nọ n’ụwa na-ekwusakwa ozi ọma ahụ n’ụwa niile.—Gụọ Daniel 7:13, 14; Matiu 24:14.
N’oge na-adịghị anya, Jizọs ga-eji ike o nwere dị ka Eze kwụsị ahụhụ niile na ndị na-akpata ha. Ọtụtụ nde mmadụ ndị nwere okwukwe na Jizọs ma na-erubere ya isi ga-ekpori ndụ na paradaịs n’elu ụwa.—Gụọ Abụ Ọma 37:9-11.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere nke a, gụọ GỊnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? isi nke 4 nke akwụkwọ a Ndịàmà Jehova bipụtara.
Ọtụtụ nde mmadụ ndị nwere okwukwe na Jizọs ma na-erubere ya isi ga-ekpori ndụ na paradaịs n’elu ụwa